विन्डोज १० को लागी जूम अनुप्रयोग - डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने? - पीसी
ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूको अनलाइन भेट-अप गर्न जुम भर्खरको अनुप्रयोग र वेबसाइट हो। यो व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ, विशेष गरी लकडाउनको समयमा। तपाईंको स्मार्टफोनको प्रयोगले तपाईंको आँखा चिम्चिन्छ र तपाईंको आँखालाई कमजोर तुल्याउन सक्छ, त्यसैले तपाई विन्डोज १० को लागि जुम लिनको लागि विधि खोज्दै हुनुहुन्छ।
अनलाइन बैठकहरू विश्वमा हुन्थ्यो, तर ती विरलै थिए। तर COVID-19 ले हामीलाई धेरै सिक्न बनायो, विशेष गरी जब यो ई-लर्निंगको कुरा आउँछ। २०२० मा टेक्नोलोजीले हामीलाई दिने एक उत्तम उपहार इन्टरनेट सुविधा थियो।
इन्टरनेट सेवाले हामीलाई ठूलो हदसम्म हाम्रो अध्ययन र व्यवसाय जारी राख्न मद्दत गर्‍यो। तर हामी यो भन्न सक्दैनौं कि ईन्टरलि learning्ग सम्भव बनाउन ईन्टरनेट मात्र जिम्मेवार छ। उपकरणहरू जुन हामीले वर्गहरू, बैठकहरू, र अन्य गतिविधिहरू गर्थ्यौं अन्तर्क्रिया, सिक्ने, र बिक्री गर्न वा खरीद गर्न सम्भव बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो।
जूम ती उपकरणहरू मध्ये एक हो जुन विभिन्न कोटीहरूमा बैठकहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसोभए, तपाईं सोचिरहनुभएको हुन सक्छ कि तपाईंको विन्डोज १० को लागी जुम हुनै पर्छ ताकि तपाईं ठूलो स्क्रिनमा धेरै भिडियो कलहरू र भिडियो वा अडियो बैठकहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
विन्डोज १० का लागि टेन्सेन्ट गेमि Budd बडी
Best उत्तम iMovie विकल्प
विन्डोज १० को लागी जुम गर्नुहोस् - परिचय
धेरै व्यक्तिको लागि मीटिंग गर्न जुम उत्तम विकल्प हो। जूम मीटअपहरू गरेर ई-लर्नि colleges पहुँच गर्न यसलाई विश्वव्यापी रूपमा विश्वविद्यालयहरू, स्कूलहरू र कलेजहरूद्वारा प्रयोग गरिएको छ। यससँग धेरै सुविधाहरू छन् जुन यसले अन्य बैठक प्लेटफर्महरूमा अग्रणी बनाउँछ। योसँग एक होस्ट छ, जसले शिक्षकहरू, संयोजकहरू, वा कुनै अन्य आधिकारिक व्यक्तित्वलाई अनलाइन सत्रमा पनि नियन्त्रण लिन मद्दत गर्दछ।
योसँग रेकर्डि option विकल्प पनि छ, र यसले तपाईंलाई मौंन वा अनम्यूटको विकल्पमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो सिक्ने सुविधालाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
जूम डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि चरणहरू:
विन्डोज १० को लागी जुम डाउनलोड गर्न केहि केहि सजिलो चरणहरू अनुसरण गरेर गर्न सकिन्छ, जुन निम्न अनुसार छन्:
पहिलो चरण भनेको तपाइँको कम्प्युटर खोल्नुहोस् र त्यसपछि कुनै वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् जुन तपाइँ यसमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब जानुहोस् zoom.us ।
चरण तीन डाउनलोड पृष्ठ सामिल छ। तपाईं यहाँ 'डाउनलोड' को रूपमा 'बैठकहरूको लागि ज़ूम क्लाइन्ट' को रूपमा लेखिएको विकल्पको साथ आउनुहुनेछ। तिनीहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंले चरण तीन गर्नु भएपछि, जुम तपाईंको कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सुरूवात हुनेछ। अर्को चरण जूम स्थापना शुरू गर्नु हो।
तपाईको पीसी वा ल्यापटपमा विन्डोज १० को लागी जुम लगाए पछि, अर्को चरण तपाईले साइन अप गर्नु हुन्छ यदि तपाई जुममा नयाँ हुनुहुन्छ वा तपाई पुरानो प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं लिंक साझेदारी गरेर जो कोहीलाई आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
पहुँच गर्न सजिलो।
बैठकहरू रेकर्ड गर्न सक्षम।
यसमा टिप्पणी नियन्त्रण छैन।
निजी टिप्पणी विकल्पहरूले विद्यार्थी वा उपस्थितिको ध्यान हटाउन सक्दछ।
जुम कुनै पनि सम्मेलन वा बैठक अप गर्न उत्तम बैठक प्लेटफर्म हो। यो तालाबन्दी सत्रको दौरान शिक्षा को एक प्रमुख स्रोत भएको छ जब सम्पूर्ण विश्व बन्द थियो। जूमले जीवनको हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संगठनलाई उच्च तौल र अडियो र भिडियो मीट-अपको माध्यमबाट ठूला स्केलहरूमा संवाद गर्न मद्दत गर्‍यो।
विन्डोज १० को लागी जुम डाउनलोड गर्ने सजिलो ट्यूटोरियलको साथ लेख लेख्नको लागि लेखिएको हो। त्यसो भए, तपाईको पीसी वा ल्यापटपमा विन्डोज १० को लागी जुम राखेर तपाई अझ राम्रो कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र लगभग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ।
पीसीमा गुगल गृह अनुप्रयोग
म्याकको लागि नेटफ्लिक्स अनुप्रयोग
१० सर्वश्रेष्ठ KissAnime.ru वैकल्पिक (१००% कार्य गर्दै)
पीसीको लागि PUBG मोबाइल कसरी पाउने?
रोब्लक्स बन्द हुँदैछ? होईन, विश्वास अफवाह छैन!
विन्डोज पीसी को लागि उत्तम PS4 Emulators (२०२०)
नक्कली आईफोन १२, मिनी र प्रो अधिकतम कसरी पहिचान गर्ने?
टिभी कार्यक्रम अनलाइन हेर्नुहोस् (२०२०) - नि: शुल्क टिभी स्ट्रिमिंग साइटहरू
noxplayer एन्ड्रोइड इमुलेटर विन्डोज १०
नि: शुल्क स्ट्रिमि movies फिल्महरू अनलाइन साइनअप हुँदैन
roblox .com / promocodes
प्रधान विद्यार्थी बनाम नियमित प्राइम
कसरी नि: शुल्क नयाँ फिल्महरू डाउनलोड गर्ने